लाइसेन्स विना सहकारी बैंकको कारोबार गर्दै ‘हव को-अपरेटिभ’ ! [भाग -१] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
काठमाडौं । काठमाडौं चुँडालदेवी, बालुवाटारमा मुख्य कार्यालय रहेको हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले सहकारी विभागको ऐन विपरीत अन्तर–सहकारी कारोबार गर्दै आएको छ ।
सहकारी विभागले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अन्तर–सहकारी कारोबार नगर्न निर्देशन दिएपनि यस सहकारीले भने खुल्ला रुपमै यस्तो कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘विभागले अन्तर–सहकारी कारोबार रोकेपनि यस सहकारीले भने गैर कानूनी रुपमा कारोबार गर्दै आएको छ ।’
यसअघि २०७७ मंसिर २२ को निर्णय अनुसार सदस्यको हकमा १ र सामूहिक लगानीको हकमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम भएको थियो । तर नविकरण शुल्कको बारेमा भने स्पष्ट लेखिएको थिएन । यही लुपहोलमा बसेर सहकारीहरुले धेरै नविकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अनुसार कुनै पनि सहकारीले अन्तर सहकारी कारोबार गर्न पाउँदैन । जसको कारोबारका लागि नै भनेर राष्ट्रिय सहकारी बैंक खडा भएको छ । केही समय अघि अर्को सहकारी बैंक खोल्ने प्रस्ताब अघि सारेको थियो । तर हाल उक्त प्रस्ताव अन्योलतामै छ । यदि एक सहकारीले अर्को सहकारीमा निक्षेप राखेको भए सहकारी विभागले नियम अनुसार तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अन्तर–सहकारी कारोबार वा सम्बन्धको विस्तार गर्ने भनी विनियममा लेखेकै भरमा अन्य सहकारी संस्थालाई भ्रममा पारी आफ्नो सहकारी संस्थामा सदस्य बनाई निक्षेप राख्न लगाउने र आवश्यक पर्दा ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्ने लगायतको अनुमति आफ्नो विनियम छ भनी प्रलोभन गराई राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृति नलिई सो कारोबार गर्न पाइन्न । तर यही काममा सक्रिय छ हब कोअपरेटिभ लि. । उक्त सहकारीले विभिन्न व्यक्तिलाई सहकारी बैंक संचालन गर्ने भनेर संचालक बनाएर करोडौं रुपैयाँ उठाएको छ । त्यससँगै अन्तर–सहकारी कारोबार गर्नका लागि मान्यता पाएको भन्दै विभिन्न सहकारीहरुलाई सदस्य बनाउने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०७९ शुक्रबार १२ : १९ बजे